'धार्मिक आस्थामाथि प्रहार' - Khabarpashchimeli
सांसद खरेलको विवादस्पद ट्विट
‘धार्मिक आस्थामाथि प्रहार’
'लक्ष्मी पूजा नगरेका देश चन्द्रमा पुगे, हामी लक्ष्मी पूजा गर्ने नेपाली कंगाल छौं । पूजा गरेर सुखी होइन भन्ने निकम्मा चेतना कहिले सकिएला हाम्रो ?' भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो अभिव्यक्ति राखेका छन् ।
३० कार्तिक २०७७, आईतवार ०८:४६
बाँके । नेपालीहरुको दोस्रो ठूलो महान् पर्व तिहारको तेस्रो दिन लक्ष्मी पूजाका दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का बाँके अध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य आइपी खरेलले धार्मिक आस्थामाथि प्रहार हुनेखालको अभिव्यक्ति दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत उनले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
‘लक्ष्मी पूजा नगरेका देश चन्द्रमा पुगे, हामी लक्ष्मी पूजा गर्ने नेपाली कंगाल छौं । पूजा गरेर सुखी होइन भन्ने निकम्मा चेतना कहिले सकिएला हाम्रो ?’ भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो अभिव्यक्ति राखेका छन् । उक्त अभिव्यक्ति अहिले सामाजिक सञ्जालमा आलोचना बनेर छाएको छ । सांसद तथा जिम्मेवार पार्टीको अध्यक्ष खरेलले धार्मिक आस्थामाथि प्रहार गरेको भन्दै उनको आलोचना बढेको छ ।
उनको अभिव्यक्ति आलोचना गर्दै राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य ऋषीराज देवकोटाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘वारे माननीय ! भनेपछि लक्ष्मी पूजा गर्ने सबै निकम्मा चेत नभएका तपाईं मात्र महान् । सोंचको चेतना अलि फराकिलो बनाउनुस् कमरेड महोदय, कसैको धार्मिक गतिविधिमा धावा बोल्ने अधिकार तपाईंलाई छैन ।’ देवकोटाले आफ्नो प्रतिक्रिया यतिमै सकेका छैनन् । उनले प्रयोग गरेका शब्द पनि सच्याउन अनुरोध गरेका छन् । राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य देवकोटाको स्टाटसमा ‘धर्म निरपेक्षताको अर्थ राम्रोसँग बुझ्नुस् । घोर आपत्ति छ, ट्विटरमा लेखिएका यि शब्द सच्चाउन अनुरोध ।’ यो पनि उल्लेख छ ।
आप्नो अभिव्यक्ति धार्मिक आस्थामाथिको प्रहार नभइ आफ्नो नीजि विचार सामाजिक सञ्जालमा राखेको प्रदेश सांसद खरेलले बताए । ‘धर्म मान्नेले टुपीदेखि पैतलासम्म माने हुन्छ,’ उनले भने, ‘मेरो आफ्नो विचार राखेको हो, अरुले मान्न पर्दैन भन्ने होइन ।’ अदृश्य शक्तिलाई पूजा गरेर धर्म नहुने भन्दै उनले भने, ‘गरिब, निमुखा, विपन्न, असक्त र बेसहारालगायतको हितका लागि काम गर्दा धर्म कमाइन्छ ।’ धर्म भनेको मानव सेवा भएको भन्दै उनले आफ्नो विचारलाई धार्मिक आस्थामाथिको प्रहारका नबुझ्न अनुरोध गरे ।